Rikoooo.com - Just a question
Nchịkọta ụlọ Mingbọ elu simulators Terminal Flight Simulator X (FSX) + Ntanye Steam & Prepar3D ruru v3
Enwere puku kwuru puku add-ons na Web maka kpochapụwo FSX na Prepar3D v1 ka v3. Wepụ ebe ọ bụla n'ụwa, na-efe ụfọdụ ụgbọelu kachasị ama ama na ụwa ọ bụla n'ime ebe 24,000 aga.
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 10 posts • Peeji 1 of 1
Jikọtara: 27 Nọvemba 2016, 17:52
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 06 Mar 2017, 14:37 am
Onye a kwesiri ibu ajuju di nfe ... ma obu ikekwe. Abụ m onye ofufe Airbus, ekwetara m nke ahụ. Ma ebe m zutere mbụ na ụgbọ elu sims, onye na-emepụta ụgbọ elu ahụ bụ ọkacha mmasị m. Yabụ, na FGFS, FS2004 ma ugbu a FSX, enwebeghị ezigbo ụgbọ elu Airbus dị mma ma nwee ntụkwasị obi. Enwere ụgbọ elu payware mana enweghị m ike imeli ya.
Ajụjụ a bụ: Kedu maka Sims abụọ ndị ọzọ,X-Plane na P3D, enwere ikuku Airbus na-arụ ọrụ zuru oke maka nke ọ bụla n'ime ha?
Isi nsogbu m nwere na ụgbọ elu ụgbọ elu, kpọmkwem Thomas Ruth A330 / 340 na PA A380 na FSX bụ na PFD enweghị otu ihe dị mfe. IAS teepu na-egosighi ma onye ọ na-akachaghị nke nọchiri anya ya, ụgbọelu ya onwe ya anaghị atụ ya ụjọ. Enweghị ụzọ isi fee ya nke ọma. Ruo ọnwa ole m na-achọ inweta enyemaka na nke ahụ mana onweghị onye, ​​n'ozuzu ya FSX obodo chọrọ inyere m aka.
A320 multi-livery mkpọ, dị ebe a na Rikoooo bụ ịtụnanya, na ihe nile m chọrọ bụ ịnyefe ụfọdụ ihe, dị ka a PFD na kwuru ụgbọ elu, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ na-tr A330. Jụrụ n'ebe nile otú ime ya ... na nnọọ na-ata m oge.
Ilaghachi FGFS bụ n'ezie ikpeazụ m nhọrọ ma m ga-eji obi ụtọ na-eme ya ma ọ bụrụ na e nweghị ndị ọzọ nhọrọ.
Jikọtara: 21 Julaị 2015, 09:45
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 07 Mar 2017, 17:06 am
Ọ bụrụ na ọ bụghị na-egosi ya, ị nwere ike dezie aircraft.cfg file idozi na. M n'ezie nwere ime na na CLS DC-10-30F. Ha shorted gị banyere 4.5K lita mmanụ ụgbọala, na lowered oké max ibu ọma n'okpuru ihe ọ n'ezie bụ.
di na nwunye Tweaks na aircraft.cfg file na ọ bụ otú ọ ga-. ugbu a, m nwere ike ofufe max-nso flights enweghị nsogbu
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 07 Mar 2017, 18:26 am
Nanị bụghị-egosi ya, na-na cfg faịlụ, uloanumaanu ọsọ bụ kpamkpam emeghieme ... 120 kts? Dị nnọọ anya na ụfọdụ kokpiiti ọdịda video na YT na ị ga-ahụ na ọ bụ n'ezie n'etiti 155 na 160, otú na 120 ... ị ga-ejedebe na ozi ọma.
M ga-agbalị na, n'ihi na n'aka.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 07 Mar 2017, 18:42 am
M na-etinyecha-enwe a lee anya na My Dash-8 si cfg file ma jide n'aka na ọkpọ bụ Mbido nri n'ihi m na-adịghị ọbụna na-nso max nso na na ọkpọ na nke ahụ na-abụghị kpọmkwem enyere ọ bụla akpa ọchị
Anyị agaghị na-akparaghị ókè na mmanụ ụgbọala na mgbe anyị na ofufe na refueling ufọt ufọt ikuku adịghị anabata.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 07 Mar 2017, 18:52 am
Ụgbọ elu mmepe bụ s ... g anyị ....
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 07 Mar 2017, 19:52 am
Jisie na-Me ka na-arụ ụka na ị na na onye LMAO
Ya maara na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na mgbe ndị mmadụ na-eme ka ndị a ụgbọ elu maka Flight Sim ha n'ezie na-eme ụfọdụ f'in 'nnyocha mbụ ya ịmata ???? >.>
Echere m na m ga-aga ọkụ ụfọdụ oghere nke elu-igwe na Mach 2 na Concorde. NO-ekwe nkwa na agaghị m uzu a ole na ole elu n'ụzọ akpa ọchị
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 08 Mar 2017, 11:14 am
M na-eche, n'ihi na ndị na mmepe, ọ ga-ezu iji nnọọ ịgwa ata ụwa ụgbọelu.
About m A340 PFD Nsogbu ... ọma ọ dị mfe ịgbanwe ụfọdụ ụkpụrụ ke ugbo elu .cfg faịlụ, ma na-agbanwe ihe ọ bụla. The PFD na-adịghị egosi ma overspeed na uloanumaanu., Otú Echere m na m na o ziri ezi. Na a ga-agbanwe ebe na VC ma ọ bụ panel faịlụ na m na ọ dịghị enyere anyị aka ịmata otú e si eme ya.
Ewoo m oke na nke a, m wee wụnye FGFS na A346 ... ọbụlagodi na ndakpọ olileanya dị na ya, enweghị ike ịmalite ya ebe ahụ, yabụ laghachi FSX ma na-agbasi mbọ ike idozi PFD ahụ.
Jikọtara: 31 Jenụwarị 2016, 15:59
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Colonelwing » 08 Mar 2017, 14:05 am
mgbe mgba ,, mmechuihu oge ,,, e a mma ihe banyere ihe niile a na ,,, ị na-amụta.
Ya anaghị adị mfe mgbe ịmụta ná ndụ a ,, m ekweta ,, ma na mgbazinye gị na-agbalị ike na-edozi nsogbu,
na nke ahụ bụ a ụzọ direction ka a succesful oge na-abịa ...
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 08 Mar 2017, 15:36 am
Hey Colonelwing, ihe bụ ihe elu?
Ọfọn, ọ na-arụ ọrụ na ụzọ m, na ọ dịghị ihe ọzọ na Air Sims. Ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ ọ na-aga ozugbo na ahịhịa biini. Achọghị imefusị ọ bụla oge na irighiri akwara na ya.
Na ndụ n'ezie, na-ekweta ime ka ndụ m nile bụ a na-alụ, ma nke ahụ bụ ihe ọzọ akụkọ, ọ bụghị maka ebe a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 09 Mar 2017, 06:08 am
ọma, unu niile n'ezie nwere ime bụ anya na Wikipedia mgbe ọ na-abịa ugbo elu Ama, n'eziokwu ... ọ dịghị ihe ọzọ azụmahịa.
10 posts • Peeji 1 of 1
Laghachi na “Flight Simulator X (FSX) + Ntanye Steam & Prepar3D ruo v3 ”